The Reception in commemorating the 70th Anniversary of the Independence Day of the Republic of the Union of Myanmar – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Reception in commemorating the 70th Anniversary of the Independence Day of the Republic of the Union of Myanmar
The Reception in commemorating the 70th Anniversary of the Independence Day of the Republic of the Union of Myanmar hosted by Consul-General of Myanmar in Los Angeles U Aung Soe Win and wife was held at their residence on Monday, 15th January 2018. Approximately 200 guests attended the reception including Consuls-General from Los Angeles Consular Corps, Deputy Chief of Protocol of the County of Los Angeles Mrs. Lourdes Saab, Director of International Relations, Policy & Protocol of Los Angeles City’s Mayor Office Mrs. Dilpreet Sidhu, as well as the representatives of Myanmar Organizations based in California and local government and business affiliates.
For the opening ceremony, the national anthem of the United States of America was performed by Mrs. Lilian Gin and the national anthem of the Republic of the Union of Myanmar was performed by Myanmar legendary vocalist Daw Ni Ni Win Shwe followed by speech from Consul-General U Aung Soe Win. The Consul-General said the event was the very first ever held as the Independence Day Reception since Consulate- General had been opened three years ago in Los Angeles. It was alsoacommemoration in coincidence with the platinum anniversary of the establishment of formal diplomatic ties between Myanmar and the United States. He stressed that the Government of Myanmar is committed to peace and development in Myanmar and promoting and protecting the human rights of every citizen. He also looked forward to receiving the continued cooperation and support of Los Angeles Consular Corps and US Government Officials in discharging the duties to promote bilateral relations and bolster trade and economic ties with the respective countries. He also expressed his appreciation to Myanmar Community for helping with every possible effort to successfully celebrate this special occasion. Moreover, the congratulatory scroll of Los Angeles County Board of Supervisors was presented to Consul-General by Mrs. Lourdes Saab and the congratulatory certificate of Los Angeles Mayor was presented to Consul-General by Mrs. Dilpreet Sidhu respectively. The guests were also served with Myanmar delicious authentic foods and refreshments.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၀)ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ခြင်း
၁။ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၊ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးအောင်စိုးဝင်းနှင့် ဇနီးတို့က ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ (၇၀)ကြိမ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တည်ခင်းသည့် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ (တနင်္လာနေ့)တွင် ၎င်းတို့၏နေအိမ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဧည့်ခံပွဲသို့ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ကောင်စစ်ဝန်များအဖွဲ့မှ ကောင်စစ် ဝန်ချုပ်များ၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ကောင်တီ၏ သံတမန်ရေးရာ ဒုတိယအကြီးအကဲ Mrs. Lourdes Saab၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့တော်ဝန်ရုံး၏ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ မူဝါဒနှင့်သံတမန်ရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Mrs. Dilpreet Sidhu၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အခြေစိုက် မြန်မာအသင်းအဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဒေသန္တရအာဏာပိုင်များနှင့် စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် (၂၀၀)ဦး ခန့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
၂။ အခမ်းအနား စတင်ကျင်းပရာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံတော်သီချင်းကို Mrs. Lilian Gin မှ လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် သီချင်းကို နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ဒေါ်နီနီဝင်းရွှေမှလည်းကောင်း သီဆိုပြီး မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ် ဦးအောင်စိုးဝင်းမှ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်မှ မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် “ယခုကျင်းပသည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဧည့်ခံပွဲသည် လွန်ခဲ့သော (၃)နှစ်က လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့၌ မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ချုပ်ရုံး ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနောက် ပထမဆုံး ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါ ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေး ထူထောင်ခဲ့သည့် ရွှေဖြူရတု အထိမ်းအမှတ်နှင့်လည်း တိုက်ဆိုင်စွာ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နိုင်ငံသားတိုင်း၏ လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ကာကွယ်ရေးတို့အတွက် သန္နိဋ္ဌာန်ချ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စီးပွားရေး မြှင့်တင်နိုင်ရေးတို့အတွက် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ကောင်စစ်ဝန်များအဖွဲ့၊ အမေရိကန်အာဏာပိုင်များနှင့်လည်း ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခု အခမ်းအနား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသည့် မြန်မာ အသိုက်အဝန်းအားလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း” စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက်တွင် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ကောင်တီ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဘုတ်အဖွဲ့၏ ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်ကြောင်း စာလွှာကို Mrs. Lourdes Saab မှလည်းကောင်း၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့တော်ဝန်၏ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ကြောင်းမှတ်တမ်းကို Mrs. Dilpreet Sidhu မှလည်းကောင်း ကောင်စစ်ဝန်ချုပ်သို့ အသီးသီး ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ဧည့်ခံပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူများအား မြန်မာအစားအသောက်များဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။